किन यस्तो बेथिति ? - Jhapa Online
किन यस्तो बेथिति ?
आजभोलि मानिसमा काम कम गफ ज्यादा भइरहेको छ । त्यसमा पनि अरुको आंगको जुम्रा देख्ने तर आफ्नो आंगको भैंसी पनि नदेख्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । खाली अरुको आलोचना गर्ने, यसो भएन–उसो भएन भनेर कुरा गर्ने गरिन्छ । तर आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी बिर्सिइन्छ । काम नगर्ने र फलको मात्र आस गर्ने ‘लुटेरा’ मानसिकता हाबी हुँदै गएको छ । अरुलाई भ्रष्ट र दुष्ट देख्ने तर अरुलाई औंला देखाउँदा आफूतिर फर्किएको चार वटा औंला नदेख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
काम बिना दामको आश बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार सदाचार जस्तै बनेको छ । काम नै नगरी गफको भरमा वा अरुको शोषण गरे कुस्त कमाउने र मानमोजी गर्ने सोच र चरित्र समाजमा व्याप्त बन्दै गएको छ । संसारकै उत्कृष्ट प्राणी मानिस हो । तर, अहिले यसलाई गलत सावित गर्न मानिस नै लागिपरेको भान हुन्छ ।
हुन त अयोग्यहरुको बोलबाला भएर पनि होला यस्तो भएको । राजनीति, सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा ‘अयोग्य’हरुकै बोलबाला छ । कलमजीवी क्षेत्र पनि यो रोगबाट बञ्चित छैन । योग्यता भन्नाले शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र होइन, यसमा इमान्दारिता, कामप्रतिको जिम्मेवारीपन, सदाचार, सत्विचार, द्रव्यपिचाशी शैलीबाट मुक्त लगायतका नैतिक गुणहरु पनि हो । नैतिक गुणहरुबाट स्खलित भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र कोरा मात्र हो । त्यसैले नैतिक, इमान्दार र जिम्मेवार बनौं । पुनः किन यस्तो बेतिथि भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
चोरीको आरोपमा इटहरीबाट दुई जना पक्राउ